पुसमै गर्मी ! (यस्तो छ मंगलबारको मौसम) – Akhabar Today
पुसमै गर्मी ! (यस्तो छ मंगलबारको मौसम)
काठमाडौं, २७ पुस । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरको मौसस सफा भएसँगै गर्मी महसुस गरिएको छ । मौसम सफा भई राम्रोसँग घाम लागेकाले दिउँसोको अधिकतम तापक्रम वृद्धि भई गर्मी महसुस भएको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिए ।
‘अब गर्मी नै शुरु भई सकेको भने होइन केही दिन मौसम सफा भएकाले दिउँसोकोे अधिकतम तापक्रम वृद्धि भई गर्मी महसुस भएको हो । कुनै मौसमी प्रणाली विकसित भए फेरी चिसो बढ्छ’, मौसमविद् मानन्धरले बताइन् ।
उनका अनुसार डम्म बादल लाग्यो भने बादलले ब्ल्यांकेटको काम गर्छ र अधिकतम तापक्रम घट्छ । पानी पर्याे भने पनि जाडो बढ्छ तर अहिले तत्कालै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको बताइएको छ । पानी पार्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
यस वर्ष माघ महिना शुरु हुन लाग्दा पनि हिउँदे वर्षा भएको छैन् । आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम २३ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो । सोमबार पनि काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २३ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस नै रहेको छ । त्यसैले गर्मी अनुभव भएको हो । मंगलबारदेखि कुनै मौसमी प्रणाली विकसित हुने सम्भावना रहेकाले देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले दिउँसोको अधिकतम तापक्रममा कमी भई चिसो बढ्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताएकी छन् ।